Chrome yeIOS yakagadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rwe QR kodhi | IPhone nhau
Chrome yeIOS yakagadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rwe QR kodhi
Mazuva mashoma apfuura Google yakatanga kuburitsa vhezheni 56 yezvinhu zvese zvinoenderana uko iko iko iko iko iko iko iko kunyorera. Mune ayo mavhezheni eMac neWindows, inopa ruzivo nezve kunyangwe mawebhusaiti atinoshanyira akachengeteka kana kwete, sekureba ivo vaine imwe mhando yefomu kwatinofanira kuisa data. Asi vhezheni 56 yemidziyo mbozha, kunyanya yeIOS inotivigira dzimwe nhau, nhau dzevamwe dzinogona kubatsira zvakanyanya, kana vachigara vachishandisa Chrome pane yavo iPhone, iPad kana iPod touch. Nedzidzo iyi nyowani, Chrome inokwanisa kuverenga QR kodhi.
Apple, senguva dzose, inoenderera ichichinjika uye ichipa mhinduro kune vashandisi natively. Iwo anozivikanwa QR kodhi ave akakosha kune vazhinji vashandisi, avo vanomanikidzwa kurodha rechitatu-bato kunyorera kukwanisa kuona ruzivo rwakakomberedzwa rwavanosanganisira. Kana isu tine iPhone 6s kana yakakwira, tinogona kushandisa 3D Kubata tekinoroji kuwana zvakananga iyo QR kodhi scan kubva kuChannel bhatani. Kana mudziyo wedu wakura, isu tinongofanirwa kuenda kunovhenekera uye tinyore QR kuti iite iyi nyowani Chrome basa kuoneka.
Kana tangoimhanya, inozoratidzwa. sikweya yatichazofanira kuisa iyo QR kodhi iri mubvunzo kuitira kuti Chrome iri pamusoro pekuvhura iyi link uye nekuratidza inoenderana ruzivo. Iyo iPad yakagashirawo kugadzirisa pamwe nekuuya kweiyi yekuvandudza, yekuvandudza iyo inogadzirisa hunhu hwemathebhu patinenge tichida kufamba pakati peaya akavhurika panguva iyoyo. Ehezve, Google yatorawo mukana weichi chiitiko kugadzirisa zvakasiyana mukuita uye kugadzikana kwechishandiso, pamwe nekuwedzera kudzikisa bhatiri kushandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Chrome yeIOS yakagadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rwe QR kodhi
Microsoft inounza mawedzera-ins eAptlook pane iOS